Waqooyiga Kuuriya oo tijaabisay gantaal cusub oo rido gaaban - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldWaqooyiga Kuuriya oo tijaabisay gantaal cusub oo rido gaaban
May 21, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Waqooyiga Kuuriya oo tijaabisay gantaal cusub oo rido gaaban. [Xigashada Sawirka: Reuters]
Seoul-(Puntland Mirror) Waqooyiga Kuuriya ayaa tijaabisay gantaal kale, sida ay sheegeen milatariga Koonfurta Kuuriya.
Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa sheegay in gantaalku uu ka tiiro gaabanyahay kuwa ay Waqooyiga Kuuriya tijaabisay saddexdii tijaabo ee u dambaysay.
Waxa uu imaanayaa asbuuc kadib markii Waqooyiga Kuuriya ay sheegtay in ay tijaabisay gantaal qaadi kara madax weyn oo nukleer ah.
Gantaalka la tijaabiyay ayaa dul maray 560km oo ku aadan badda Japan, sida ay sheegeen masuuliyiinta Koonfurta Kuuriya.
Waqooyiga Kuuriya ayaa aaminsan in ay sii wado dadaalada ay ku rabto in ay ku sameysato madaxyada qaada hubka wax gumaada ee nukleerka iyo in ay helaan gantaalo tiiro dheer oo awood u leh in ay gaaraan Mareykanka oo ah cadowgeeda kowaad ee caalamka.